कस्तो छ तपाइको जिवनशशैली ? के कुराले कस्तो असर पारिरहेको छ ? - शैली न्युज
कस्तो छ तपाइको जिवनशशैली ? के कुराले कस्तो असर पारिरहेको छ ?
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०९:०९
समयको कमी भनौं, आधुनिकताको प्रभाव भनौं वा जिब्रोको स्वाद रु हिजोआज मानिसहरू घरको खानाभन्दा बाहिरको खानाप्रति आकर्षित भैरहेका छन् । ठूला हुन् वा साना हर कोही घरबाहिरको पिज्जा, पास्ता, मस्म, चाउमिन, ससेजजस्ता खाद्यपदार्थमा आफू सन्तुष्ट भएको महसुस गर्न थालेका छन् ।
फुड टेक्नोलोजिस्ट भारती अधिकारी झा भन्छिन्–कहिलेकाहीँ बाहिरको खाना खानु ठीकै हो तर यही नै बानी बस्दै गयो भने भविष्यमा त्यसका थुप्रै नकारात्मक प्रभाव देखापर्न सक्छन् । मुख्य कुरा त यस्ता खानेकुरामा मिसाइएको रंगका कारण तत्काल एलर्जी हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता खानेकुरामा अजिनोमोटो, सोडियम, ग्लुटामेट आदि हालिएका हुन्छन् । जुन उमेरसँगै उचाइका लागि नोक्सानदायक छन् ।
आधुनिक पुस्ता तिर्खा लाग्नेबित्तिकै पानीको तिर्खा कोल्ड ड्रिंक्सले मेटाउँछ । यो मानव शरीरको हड्डीका लागि हानिकारक छ । यसले हड्डीमा भएको क्याल्सियमको मात्रा अवशोषणमा बाधा पुर्‍याउँछ भने यो दाँतका लागि पनि फाइदाजनक छैन । त्यसमा भएको चिनी दाँतमा अड्किएर बस्छ जहाँ ब्याक्टेरियाहरू उत्पन्न हुनसक्छन् । फलतस् संक्रमणको खतरा वृद्धि हुन्छ ।
सप्लिमेन्टका रूपमा अहिले विभिन्न किसिमका भिटामिन चक्की खाने ट्रेन्ड छ । कोपनहेगन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार भिटामिन ए र ई तथा विटा केरोटनका कारण अकाल मृत्युको सम्भावना१६ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ ।
यद्यपि सामान्य मल्टी भिटामिन सामान्य नै मानिन्छ ।सप्लिमेन्टका रूपमा कुनै भिटामिन सेवन गर्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
प्रदेश ३ मा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम विस्तार हुँदै
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री बर्खास्त